Vagari vemuGweru Vochema Chema neKushaya Mvura
Vamwe vagari vemuGweru vari kutsutsumwa nenyaya yekushaikwa kwemvura, dzimwe nzvimbo dzichinzi dzave nenguva inopfuura mwedzi dzisingawane mvura, panguva iyo pane mashoko ehuwori mukanzuru.
Vagari vemunzvimbo dzakasiyana siyana muguta reGweru vakaudza Studio 7 kuti dambudziko rekushaikwa kwemvura idambudziko rave kuvashaisa hope sezvo vachimuka pakati pehusiku kuti vanochera mvura kune dzimwe nzvimbo dzainobuda husiku kusanganisira pane zvimwe zvibhorani
Ambuya Thandiwe Matinyenya avo vanogara mumusha weMkoba 1 umo mave nenguva inopfuura mwedzi musina mvura vakati vanosiwana mvura pakamba yemapurisa paMkoba 1 asi pave kurambidzwa. Ambuya Matinyenya avo vanogara nevazukuru vavo vakati vave kutyira kutekeshera kwezvirwere.
Mumwe murume uyo akangozvidoma nezita rekuti Moyo anoti varume vanosiira vanhukadzi basa rekutsvaga mvura asi iko zvino vave kutobatsirawo nekuda kwekuti vanotyira kuti madzimai nevanasikana vanogona kuwira munjodzi pavanotsvaga mvura husiku.
Muzvare Florence Madzikura vanoti vamwe vagari vashoma vanowana mvura nekuda kwekuti dzimba dzavo dziri pakaderera vave kutengesera vamwe mvura nemari yekunze.
Sachigaro wesangano reWomen’s Coalition of Zimbabwe , WCoZ, mudunhu reMidlands, Amai Alice Maqatha vanoti dambudziko rekushaikwa kwemvura rinonyanya kubata vanhukadzi vachitiwo dai kanzuru yaona zvekuita sezvo vagari vave kushaya zano nekuda kwedambudziko iri
Mumwewo mugari VaJohn Divala vanoti kunyange hazvo vachinzwisisa matambudziko akatarisana nekanzuru, havagutsikane nekuti kanzuru inoramba ichibhadharisa vagari mutero wemvura wakakura.
Dambudziko rekushaikwa kwemvura muguta reGweru riri kuuya panguva iyo paine nyaya dzehuwori dzinonzi dziri kupomerwa makanzura eguta iri.
Meya weguta reGweru VaJosiah Makombe vabvuma kuti guta reGweru rakatarisana nedambudziko remvura vakati izvi zviri kunyanya kukonzerwa nekushomeka kwemvura mumadhamu uyewo kufa kwepombi dzinopomba mvura kubva kudhamu rimwe chete riri kushandiswa pari zvino.
Panyaya yehuwori hwavari kupomerwa VaMakombe vati aya manyepo. Munguva pfupi yapfuura bazi rekutongwa kwematunhu rakanyorera makanzuru emunyika kuti aendese magwaro kubazi iri anoratidza nzvimbo dzekuvakira dzakatengwa nemakanzura mumaguta nemadhorobha emunyika uye mari dzavakabhadhara.
VaMakombe, avo vanovewo mukuru weUrban Councils Association of Zimbabwe, vati kanzuru yavo nemamwe yakaendesa magwaro aya.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune munyori webazi rezvekutongwa kwematunhu VaZvinechimwe Churu sezvo nharembozha yavo yange isingabatike.
VaCharles Mazorodze avo vanove mukuru wesangano reGweru Residents Forum vati dambudziko rekushikwa kwemvura harizi muGweru chete asi mumaguta nemadhorobha akwanda emunyika vakatiwo zvakakosha kuti hurumende ive nehwaro hwakajeka hwekubatsira makanzuru panyaya iyi.
Zvichakadaro mune imwewo nyaya, kanzuru yeguta reBulawayo inoti dambudziko rekushakwa kwemvura muguta iri iro rakawedzerwa nekuda kwekubiwa kwakaitwa tambo dzemagetsi pane imwe nzvimbo inochengeterwa mvura yakachena, richaita nani pakupera kwemwedzi uno apo kanzuru inotarisira kuti tambo idzi dzinenge dzagadzirwa.
Kanzuru yeguta reBulawayo yange ichipa vagari mvura kamwe chete pavhiki nekuda kwekushomeka kwemvura mumadhamu anopa guta iri mvura asi dambudziko iri rakawedzera munguva pfupi yapfuura nekuda kwekubiwa kwetambo dzemagetsi uku.